onlineakhabar.com: सिँचाइ मन्त्री गिरीले म गुण्डा पनि हुँ भन्दै यसरी थर्काए स्थानीयवासीलाई…. (अडियोसहित)
Main News, National, Nepali News, Powerful Nepal » सिँचाइ मन्त्री गिरीले म गुण्डा पनि हुँ भन्दै यसरी थर्काए स्थानीयवासीलाई…. (अडियोसहित)
सिँचाइ मन्त्री गिरीले म गुण्डा पनि हुँ भन्दै यसरी थर्काए स्थानीयवासीलाई…. (अडियोसहित)
दाङ, २६ भदौ।
सिँचाइ मन्त्री एवं कांग्रेस नेता दीपक गिरीले आफू गुन्डासमेत भएको बताएका छन् । पक्राउ परेका आफ्ना साथीलाई छुटाउन आग्रह गर्दै टेलिफोन गर्ने कार्यकर्तालाई थर्काउने क्रममा मन्त्री गिरीले आफू गुण्डा भएको बताएका हुन् ।
अडियो रेकर्डमा मन्त्री गिरीले टेलिफोनमा कार्यकर्तासँग भनाभन हुँदै गर्दा भने- म गुण्डा पनि हुँ फेरि ।
अनलाइन खबरबाट- साभार
Tags : Main News National Nepali News Powerful Nepal